Medical Engineering - Luoyang yakabva yanyatsobatana Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
Nokuti avo X-ray michina uye kombiyuta tomographs, zvokurapa mudziyo vagadziri vanovimba yedu mira anodes uye X-ray kunangwa dzakagadzirwa TZM, MHC, tungsten-rhenium alloys uye tungsten-mhangura. chubhu uye detector yedu zvinoriumba, somuenzaniso muchimiro rotors, akatakura zvinoriumba, cathode magungano, emitters CT collimators uye shieldings, zvino chikamu kwazvo ano kuri chirwere ano.
X-ray nemwaranzi kunoitika apo maerekitironi vari decelerated panguva anode. Zvisinei, 99% kuti mazano simba iri dzikwanise kupisa. nesimbi dzedu angakudzivisai dzakakwirira tembiricha nechokwadi yakavimbika chafariz utariri mukati X-ray hurongwa.
N munda radiotherapy tinobatsirawo ari kuzoita ezviuru varwere. Pano, mhedziso nemazvo uye asingabvumi kuchinja unhu kunokosha. multileaf yedu collimators uye shieldings akaita kubva zvikuru gobvu tungsten-weheavy metal chiwanikwa Densimet® handitsauki munhu millimeter kubva chinangwa ichi. Ivo nechokwadi kuti mwaranzi achingoraramira nenzira kuti inowira hosha zvinyama pamwe vanyatsoona zvakarurama. Namamota kupesvedzera mukuru-zvakarurama irradiation apo zvinyama utano inoramba kudzivirirwa.
Panyaya yevanhu zvakanaka, tinoda kuva kudzora zvizere. Our cheni Kugadzirwa hakurevi kutange rokutenga pamusoro simbi asi rutapudzo pakati yakatsvuka zvinhu kuumbika upfu simbi. Chete nenzira iyi tinogona kubudirira yakakwirira zvinhu kuchena kunozivisa zvigadzirwa edu. We kugadzira tsindirana esimbi zvinoumba kubva porous upfu blanks. Kushandisa vanoumba chaiwo pezvakaitwa uye zvokuimba kubudiswa matanho, uyewo mamiriro-of-nounyanzvi unhani uye kujoina ruzivo, tinofanira kutendeukira awa kunzwisisa zvinoumba kunonyanyisa performanceand hunoshamisa unhu.